Mgbochi ibu ibu: Ceilistat ntụ ntụ na Orlistat ntụ ntụ | AASraw
Mgbochi ibu ibu: Ceilistat ntụ ntụ na Orlistat ntụ ntụ
/blog/nke a , Orlistat/Mgbochi ibu ibu: Ceilistat ntụ ntụ na Orlistat ntụ ntụ
Ihe na 04 / 12 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na nke a, Orlistat.
Ihe niile banyere Ceilistat ntụ ntụ na Orlistat ntụ ntụ
1.Cetilistat ntụ ntụ
2.Orlistat ntụ ntụ
3.Cetilistat ntụ ntụ Dosage
4.Orlistat ntụ ntụ
5.Cetilistat ntụ ntụ nyocha
6.Orlistat ntụ ntụ nyochaa
7.Cetilistat ntụ ntụ mmetụta
8.Orlistat ntụ ntụ mmetụta
9.Cetilistat ntụ ntụ Karịrị Ka Mma karịa Orlistat ntụ ntụ
10.Buy Anti-oke ibu ntụ ntụ online
Akwukwo ogwu (Oblean)
I.Cetilistat (Oblean) ntụ ntụ bụ isi Characters:
aha: Akwukwo (Oblean) uzuzu
Molekụla Formula: C25H39NO3
agba: Gray Powder
1. Ceilistat ntụ ntụ
Ceilistat ntụ ntụ bụ onye na-emechi egbugbere ọnụ pancreatic, enzyme nke na-akụda triglycerides n'ime eriri afọ. Enweghị enzyme a, a na-egbochi triglycerides site na nri ka a ghara ịkụnye ya hydrolyzed n'ime abụba abụba na-enweghị ike ịnwụ ma hapụ ya ka a ghara ịhapụ ya. Ọgwụ a, ọ bụ ezie na yiri ụdị ọgwụ Orlistat dị ugbu a na FDA, nwere ike ịnwe mmetụta profaịlụ na-edozi ahụ karịa otu ọdịdị dị iche iche. Usoro ọmụmụ 2 na-amụ ihe gbasara 612 obese, ndị na-arịa ọrịa shuga na BMI nke 28 na 45 kg / m2 maka oge nhazi 12 izu. Ọkụ a na-edozi na 80 na 120 mg kwalitere nnukwu ibu ma e jiri ya tụnyere placebo (kg 3.85 na 4.32 n'arọ vs. 2.86 n'arọ, n'otu n'otu). Ihe nkedo nke na-ekpuchi ntụpọ na-ekpuchi ya bụ nke yiri nhalata dị arọ nke na-enweta ma ọ bụ Orlistat ntụ ntụ (3.78 kg). A kwadoro ntụ ntụ ntụ a na-edozi nke ọma ma gosipụta ntachi anya n'ihi ihe ọjọọ karịa na placebo na Orlistat ntụ ntụ dị iche iche. Nyere na nkwụsịtụ ahụ na Orlistat ntụ ntụ bụ nke dị njọ karịa 120 mg Ceilistat powder powder and placebo groups, na ọ bụ n'ihi ihe ọjọọ na-akpata ọrịa, Ceilistat ntụ ntụ nwere ike ịghọ onye na-egbochi lipase nke ga-eme ka ọ ghara ịdị njọ. Ihe nyocha nke 3 nke Ceilistat ntụ ntụ na-aga n'ihu ugbu a na Japan.
2. Orlistat ntụ ntụ ntụ ntụ
Orlistat ntụ ntụ ntụ bụ ihe na-emepụta ọgwụ na-egbuke egbuke nke na-egbochi ihe oriri nke 30% site na-egbochi pancreatic na lipstick lipstick. A kwadoro ntụziaka Orlistat na 1998 ma ugbu a bụ ọgwụ dị naanị maka ọgwụ nchịkwa nke oke ibu. Ụdị ọgwụ ahụ bụ 120 mg capsule 3 ugboro kwa ụbọchị, na ọkara ọkara (60 mg) dị n'elu-na-counter na ụfọdụ mba, gụnyere US. Orlistat ntụ ntụ maka ọnwụ ekwuputala na ọtụtụ RCT maka nhazi oge oke oke (dika 4 afọ). Na nyocha nke nyocha 12 na 15, ihe nrịba dị iche na ọnwụ nha ma ọ bụ Orlistat ntụ ntụ bụ -2.59 kg (95% CI, -3.46 to -1.74 kg) na ọnwa 6 na -2.9 kg (-3.2 to -2.5 kg ) na ọnwa 12, nke kariri placebo. Mmetụta bara uru n'ahụ arọ ahụ bụ zuru ezu iji melite ọtụtụ akụkụ cardiometabolic, gụnyere mgbatị ụkwụ, ọbara mgbali, ọkwa glucose ọbara, na profaịlụ lipid. Na nyocha nke gụnyere 15 ọmụmụ ihe gbasara 10,995 ndị na-eso na Orlistat ntụ ntụ ma ọ bụ placebo maka ma ọ dịkarịa ala 6 ruo ọnwa 12, ọgwụgwọ na Orlistat ntụ ntụ jikọtara ọnụ ọgụgụ dị elu na cholesterol zuru ezu mgbe edozichara maka ọnwụ, nke egosi Orlistat ntụ ntụ bụ ngwá ọrụ bara uru iji meziwanye profaịlụ ihe ize ndụ nke cardiovascular na ndị ọrịa buru ibu. Orlistat ntụ ntụ nwekwara ike belata ụdị ọrịa 2 dị na 9.0% gaa na 6.2% (HR, 0.63; 95% CI, 0.46 na 0.86) na nyocha nke 4 ogologo oge.
N'etiti ndị Korea buru ibu na-anata Orlistat ntụ ntụ maka izu 24, mgbanwe dị arọ site na ntinye bụ -2.8 kg. Ọgwụgwọ na Orlistat ntụ ntụ mekwara ka ọtụtụ akụkụ metabolic dị mma. E nwere mmụba dị ịrịba ama nke nchịkwa glycemic (HbA1c, -0.87%; P <0.01), na-ebu insulin, cholesterol zuru ezu, LDL-C (P <0.001), mgbagharị ụkwụ (-5.48 ± 0.54 cm, P <0.001), ọbara systolic nrụgide na ọbara diastolic (P = 0.000), na-enweghị mmetụta dị egwu.
Ihe ndị kachasị emetụta nke Orlistat ntụ ntụ bụ eriri afọ na-agụnye afọ ọsịsa, ọnweghị ụbụrụ na-adịghị mma, ntụpọ mmanu, flatulence, bloating, na dyspepsia. N'ihi nsogbu ndị ahụ, enweghi ike ịnabata ntụ ntụ Orlistat. Otú ọ dị, mmetụta dị iche iche na-eme ngwa ngwa ma nwee ike belata ka ndị ọrịa na-amụta otú e si ezere nri ndị bara ọgaranya.
N'oge na-adịbeghị anya, a kọwo ajọ mmerụ dị njọ na afọ 10 gara aga. N'etiti 1999 na 2008, United States FDA natara akụkọ 32 banyere mmerụ ahụ ike, gụnyere 6 nsogbu nke imeju umeji na ndị ọrịa na-eji Orlistat ntụ ntụ ntụ ntụ, nke kpaliri FDA United States iji mee nyochaa nke Orlistat ntụ ntụ nchekwa. Nyocha ahụ mere ka a mara ọnụ ọgụgụ nke 13 ikpe nke mmerụ ahụ siri ike, nke a kọrọ n'etiti Eprel 1999 na August 2009 site na atụmatụ 40 nde mmadụ nọ n'ụwa nile bụ ndị ji Xenical ma ọ bụ Alli mee ihe. Ndị FDA United States gwara ndị ọkachamara ahụike ka ha nọgide na-ede akwụkwọ Orlistat ntụpụ na August 2009, n'ihi na mmerụ ahụ ike dị ụkọ. Otú ọ dị, nyochaa na May 2010 dugara nchịkọta akwụkwọ na mgbakwunye na ịdọ aka ná ntị maka mmerụ ahụ ike dị ukwuu iji kụziere ọha na eze gbasara ihe ịrịba ama na mgbaàmà nke imebi ahụ.
3. Nke a na-eme ka ọkpụkpụ na-emepụta ihe
Ceislim (Ceilistat powder) a na-enye ya dịka 60mg ike capsules maka nchịkwa ọnụ. A na - eji ọgwụ na - eri nri iji jide n'aka na ọ nwere ike ịrụ ọrụ mgbe nri a na - eri nri, nke mere na enwere ike iwepụ abụba sitere na nri ahụ n'ụzọ dị irè. Dọkịta gị ga-agwa gị ụdị ọgwụgwọ ọ bụla ị ga-eji na ọgwụ ahụ ọ bụla, nakwa dị ka usoro a chọrọ kwa ụbọchị. Ọ dị ezigbo mkpa na ị na-agbaso ntụziaka ndị a. Ejila ihe karịrị dọkịta gị agwa gị ka ị were.
A na-enye capsules aisimlim na 60 mg ike. Nchịkọta ahụ bụ iji otu capsule na nri ọ bụla. Emela ihe oriri ma ghara ịnara ọgwụ karịa ọgwụ. ewere ceilisat na nri nwere ike inyere aka igbochi abụba site na ihe ị na-eri site n'ịnọnye gị n'ahụ. Jide n'aka na gị na dọkịta gị na-arụ ọrụ iji hụ na eri nri ziri ezi na-eri ma ị na-ewere ọgwụ a dịka i kwesịrị.
4. Orlistat ntụ ntụ
Orlistat ntụ ntụ a na-eji eme ihe dị ka capsule na capsule nke na-abụghị nke ederede. Ọgwụgwụ a tụrụ aro maka Orlistat ntụ ntụ bụ 120-mg (a capsule) otu oge, ugboro atọ n'ụbọchị. Were ntụ ntụ Orlistat n'oge nri ma ọ bụ ruo 1 hour mgbe nri. Ọ bụrụ na eri nri ma ọ bụ enweghị abụba, ị nwere ike ịsacha ngwugwu gị. Soro ntuziaka ndị dị na labeling ọgwụ gị ma ọ bụ akara ngwugwu nke ọma, ma jụọ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ ike ịkọwa akụkụ ọ bụla ị na-aghọtaghị. Were Orlistat ntụ ntụ kpọmkwem dị ka a gwara. Ejila ihe karia ma ọ bụ na-erughị ya ma ọ bụ buru ya karịa mgbe dọkịta gị nyere iwu ma ọ bụ kwuo na ngwugwu ahụ.
★ Mgbe Ị Na - ewepu Ugwu Orlistat:
• kewaa oke abụba kwa ụbọchị, carbohydrates, na protein.
• Ọ bụ ezie na ị na-ebute ntụpọ Orlistat, ị kwesịrị izere ihe oriri na ihe karịrị 30% abụba.
• Mgbe ị na-eri anụ, anụ ọkụkọ (ọkụkọ) ma ọ bụ azụ, rie 2 ma ọ bụ 3 ounces (55 ma ọ bụ 85 grams) maka ọrụ, nsị anụ dị mma. enwekwu ọka, mkpụrụ osisi, na akwụkwọ nri. Dochie mmiri ara ehi na mmiri ara ehi ma ọ bụ 1% mmiri ara ehi na belata ma ọ bụ obere mmiri ara ehi.
• Na-eme ka ọtụtụ vitamin A, D, E, K, na beta-carotene na-enweta vitamin kwa ụbọchị
Orlistat ntụ ntụ gbochie absorption nke ụfọdụ vitamin abụba-soluble na beta carotene. Ya mere, mgbe ị na-eji Orlistat ntụ ntụ ị kwesịrị ị na-eburu ihe dị iche iche kwa ụbọchị nke nwere vitamin A, D, E, K, na beta-carotene. Gaa akara ahụ iji chọta ngwaahịa dị iche iche nke nwere vitamin ndị a. Were multivitamin otu ugboro n'ụbọchị, 2 awa gara aga ma ọ bụ 2 awa mgbe ị nara Orlistat ntụ ntụ, ma ọ bụ buru multivitamin n'oge ụra.
Pịa ebe a: Were Orlistat ntụ ntụ, Orlistat ntụ ntụ, zụta Orlistat ntụ ntụ, Orlistat ntụ ntụ mmetụta utịp.
★ Mgbe Ị Jiri Ya:
Debe ọgwụ a n'ime akpa ahụ, mechiri emechi, Ebee ka ụmụaka ga - esi eru. Oge mmebi nke Orlistat ntụ ntụ na-abụkarị afọ 2, ọ ga-aka mma ịchekwa ya na ụlọ okpomọkụ ma pụọ ​​na mmiri ọkụ, mmiri (ọ bụghị n'ime ime ụlọ ịwụ), na ìhè. Ụzọ kachasị mma ị ga-esi jiri ọgwụ gị mee ihe bụ site n'usoro iweghachị ọgwụ kama iwepụ ọgwụ a n'ụlọ mposi.
★ Cycle Of Orlistat ntụ ntụ
A ghaghị iwere nkuzi Orlistat kwa ụbọchị iji dị irè. Ọnwụ ọnwụ na - amalite n'ime izu 2 ma na - aga n'ihu maka 6 ruo ọnwa 12 na ọnwụ Orlistat ntụ ntụ. Orlistat ntụ ntụ ga-enyere gị aka ịnọgide na-enwe ọhụụ ọhụrụ a ma nyere aka igbochi ịtaghachi ibu.
A na-ahụkarị mmelite na ihe ndị dị ize ndụ (dịka nbelata ọbara mgbali elu, normalizing ọkwa ọbara shuga na iweda ọkwa cholesterol) na ọnwa 1 ka amalitere ọgwụgwọ ma nọgidere na-arụ ọrụ n'oge usoro ọgwụgwọ Orlistat.
5. Nke a na-enyocha ntụpụ ntụ ntụ
Ọkpụkpọ a na-agwọ ọrịa a bụ onye na-egbochi lipase pancreatic, enzyme nke na-akụda triglycerides n'ime eriri afọ. Enweghị enzyme a, a na-egbochi triglycerides site na nri ka a ghara ịkụnye ya hydrolyzed n'ime abụba abụba na-enweghị ike ịnwụ ma hapụ ya ka a ghara ịhapụ ya. Ọgwụ a, ọ bụ ezie na yiri ụdị ọgwụ Orlistat dị ugbu a na FDA, nwere ike ịnwe mmetụta profaịlụ na-edozi ahụ karịa otu ọdịdị dị iche iche. Usoro ọmụmụ 2 na-amụ ihe gbasara 612 obese, ndị na-arịa ọrịa shuga na BMI nke 28 na 45 kg / m2 maka oge nhazi 12 izu. Ọkụ a na-edozi na 80 na 120 mg kwalitere nnukwu ibu ma e jiri ya tụnyere placebo (kg 3.85 na 4.32 n'arọ vs. 2.86 n'arọ, n'otu n'otu). Okpukpo uzo ogwu a na-eme ka o buru ibu dị ka mmeru ọnwụ nke na-enweta ma ọ bụ Orlistat ntụ ntụ (3.78 n'arọ). A kwadoro ntụ ntụ ntụ a na-edozi nke ọma ma gosipụta ntachi anya n'ihi ihe ọjọọ karịa na placebo na Orlistat ntụ ntụ dị iche iche. Nyere na nkwụsịtụ ahụ na ngalaba Orlistat ntụ ntụ bụ nke dị njọ karịa 120 mg Ceilistat powder and placebo groups, ọ bụ n'ihi ihe ọjọọ ọ bụla na-eme ka ahụ, nke na-eme ka ọ bụrụ onye na-egbu egbu egbugbere ọnụ. Ihe nyocha nke 3 nke Ceilistat ntụ ntụ na-aga n'ihu ugbu a na Japan.
6. Orlistat ntụ ntụ ntụle nyocha
Mgbe ị na-atụle ntụpọ Orlistat ntụ ntụ, ọ ga-adị mkpa iji nlezianya tụlee mmetụta ndị nwere ike ime, nnyocha ọmụmụ, na ihe mmadụ ga-ekwu maka ya. FDA ezigawo akwụkwọ ozi ịdọ aka ná ntị nke ga-eme ka mmebi akụrụngwa dị njọ site Orlistat ntụ ntụ ntụ. E nwekwara ọtụtụ mmetụta ndị nwere ike ịnweta, ọtụtụ ndị ahịa kwukwara na ha nwere mmetụta. Nakwa, nchọpụta ahụike gosipụtara na ọ ga-abụ nanị irè ruo na ọnwụ 6 maka ọnwụ otu afọ. Nke a abụghị ebe ọ bụla a chọrọ maka ebe ahụ iji nweta nsonaazụ ngosi. Ka o sina dị, ọtụtụ ndị na-eme njem nlekọta adịghị ahụ mgbanwe ọ bụla dị arọ.
E nwere ihe nchịkọta nri kacha mma 2016 a na-akpọ Sletrokor nke e debere dị ka ụzọ a n'ihi ihe niile e kere eke, ihe nhụjuanya dị ukwuu, na nkwenye ndị ahịa. Ọtụtụ ndị ọrụ kwuru na ọ dị mma ma dị irè maka inye aka na ọnwụ. A na-egosipụtakwa na ọ dị mma maka Mbelata agụụ, na-arịwanye elu metabolism, na-enyere aka melite ọnọdụ, na ọtụtụ uru ndị ọzọ. Ị nwere ike ịchọpụta ihe ndị a na-eri nri site n'ịpị ebe a.
Sletrokor na-akwadokwa ụbọchị 30 zuru ezu na-akwụghachi ụgwọ. Ọ bụrụ na ọ bụla kpatara ịchọrọ ịtọọ oge ịlaghachi, ịnwere ike ime nke a n'enweghị ajụjụ a jụrụ. Pịa ebe a iji chọtakwuo banyere Sletrokor.
7. Nke a na-emetụta mmetụta dị iche iche nke na-agwọ ọrịa a
Ihe a na-akọkarị Nke a na-emetụta mmetụta dị iche iche nke na-agwọ ọrịa a bụ mmanụ na-esi ísì ụtọ, afọ ọsịsa, ụbụrụ na-adịghị mma, mmegharị ụbụrụ ugboro ugboro, na flatulence. Karịsịa, na ndị na-arịa ọrịa shuga na-arịa ọrịa shuga, a na-ebelata ọkwa nke hemoglobin glycosylated (HbA1c). Okpukpo uzo ogwu a na-egosi otutu ihe ojoo na-adighi nma, nke kachasi ihe omimi nke ogwu (steatorrhea), nke nwere ike idi karia Orlistat ntụ ntụ.
8. Orlistat ntụ ntụ mmetụta
Ọtụtụ n'ime mmetụta ndị metụtara na Orlistat ntụ ntụ bụ mgbaàmà nke digestive, ma eleghị anya n'ihi na ndị na-adịghị etinye aka na abụba. Ihe kachasị na-emetụtakarị bụ mgbanwe nke oge obi, nke na-emekarị n'ime izu abụọ mbụ nke na-ewere mgbakwụnye ahụ. Mmetụta dị iche iche pụrụ ịla, ma ọ ga-ekwe omume na ọ ga-aga n'ihu maka oge mmadụ dum na ọgwụ ahụ.
Ihe Ndi Nwere Ike Ime
• Belata absorption nke vitamin-soluble vitamin dị ka A, D, E, na K
• Na-eme ka ihe mgbu belata
• Ihe gbasara akụrụ
• Anwle nkucha
• Ezigbo ume
• Ike ọgwụgwụ
• mmanu mmanu, ebe a na-eme ihe nro
• Ọganihu na-arịwanye elu, nkwonkwo akwa, enweghị ike ịchịkwa obi
Mmetụta nke Ụdị Oge
FDA ka ebipụtakwara ihe ọmụma banyere ugboro ole na-enwe mmetụta ụfọdụ. N'afọ mbụ nke ịṅụ ọgwụ ike Orlistat ntụ ntụ ntụ ntụ:
• 26.6% nke ndị ọrụ na-atụnye ntụpọ mmanu.
• 23.9% kọrọ gas na ikuku.
• 22.1% mmeghari mmeghari obi ngwa ngwa.
• 20% nwere ọdụ ma ọ bụ mmanụ akwa.
• 10.8% nwere ọtụtụ ọnụọgụ obi.
• 7.7% na-arịa ọrịa ụbụrụ.
Maka 8.8% nke Orlistat ntụ ntụ ọrụ, mmetụta ndị dị oke mkpa ka ha kwụsị ọrụ. Na mgbakwunye na nwayọọ ma ọ bụ na-agafeghị oke Orlistat ntụ ntụ mmetụta, mmetụta ndị siri ike karị nwere ike ime. Ndị ọrụ nwere nsogbu ọ bụla ọzọ dị egwu ga-akwụsị ma kọtụrụ dọkịta ha.
9. Nke a na-edozi ntụ ntụ na-edozi nke ọma karịa Orlistat ntụ ntụ
Akwukwo Igbo, Agwa - April 24, 2007 - Akwukwo ililistat, akwukwo nke ogwu na-egbu egbu, o yiri ka o di irè na nhazi nke oke ibu na ihe ndi ozo dika onye ozo na-eme ihe, Orlistat powder powder, ka o gosiputara nkwụsi ike, dika usoro 2 abuo ndi mmadu abua, ndi kpuru uzo, ndi na-eduzi ebebo, ihe omumu nke 12.
"Mgbochi egbugbere ọnụ egosipụtala nrụpụta ọrụ na ndị ọrịa buru oke ibu na ndị ọrịa buru oke ibu na-arịa ọrịa shuga," ka Peter Kopelman, Dean, faculty of health, University of East Anglia, Norwich, United Kingdom, kwuru, bụ ndị gosipụtara ọmụmụ abụọ ahụ maka akwukwo a na-agwọ Ceilistat. Otu ebe a na 15th European Congress on Obesity (ECO).
Ọmụmụ ihe mbụ ahụ nyochara iji ihe Ceilistat ntụ ntụ ntụ ntụ na 372 obese patients with a body mass index (BMI)> 30, na ebe nile na Europe. Ndị ọrịa niile natara ndụmọdụ na-eri ihe na-eri ọkụ n'oge niile gbasara ọmụmụ ihe ma rie nri a na-edozi ka ha dị ka 500 kcals n'okpuru nri ha na-edozi. Na mgbakwunye, e nyere 60, 120, ma ọ bụ 240 mg nke Ceilistat ntụ ntụ, ma ọ bụ placebo, n'oge nri, ugboro atọ kwa ụbọchị. Eritere nnukwu ihe nfe n'ime ụdị ọgwụgwọ niile na izu 12, na nkwụsị 3.5-kg dị arọ na 120 mg Ceilistat powder ntụ ntụ ugboro atọ kwa ụbọchị na placebo (P <.05).
"Ceilistat powder powder was effective in inducing weight loss in 12 weeks of study," Dr. Kopelman kwuru na a ngosi na April 23rd. "Na mgbakwunye, enwere mbelata dị ukwuu n'ichegharị ụkwụ." N'ọmụmụ nke abụọ nke Dr. Kopelman kwuru, ndị nchọpụta debanyere 612 isiokwu obese na ụdị ọrịa 2 dị iche iche, ndị na-ewere metformin. Ọtụtụ n'ime ndị ọrịa nọkwa na statins, ihe dị ka otu ụzọ atọ na-aṅụkwa ọgwụ ọgwụ ndị na-egbochi ọrịa.
Dị ka ọ dị na nchọpụta gara aga, ndị ọrịa natara nri hypocaloric na otu n'ime usoro dị iche iche dị iche iche nke Ceilistat powder (40, 80, ma ọ bụ 120 mg), ma ọ bụ placebo. Na mgbakwunye, otu ìgwè ọmụmụ nke anọ abanyeghị na 120 mg nke Orlistat powder powder 3 ugboro kwa ụbọchị. Dr. Kopelman kwuru na enwere mmụba dị arọ n'ime ụdị ọgwụgwọ niile, na ihe dịka 35% nke isiokwu ndị dị n'elu ihe ngwọta Leilistat ntụ ntụ ntụpọ nke na-enweta ihe dị njọ banyere 5% nke ibu arọ ha ma ọ bụ karịa. Tụkwasị na nke ahụ, enwere mgbatị dị ịrịba ama na hemoglobin a na-agụnye aha (HbA1c) n'elu izu 12. Ọ bụ ezie na data nrụpụta dị n'etiti Heilistat powder powder and Orlistat powder powder, nnukwu esemokwu dị n'etiti ọgwụ abụọ ndị a banyere proficiency tolerance, dị ka Dr. Kopelman.
N'ozuzu ya, ndị ọrịa na Orlistat ntụ ntụ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ karịa ọtụtụ ihe ọjọọ dị njọ - nke bụ isi ụkwara afọ - nke na-eduga ná nkwụsịtụ ọgwụgwọ karịa nke òtù Ceilistat powder powder. Ọnụ ọgụgụ nke ihe ọjọọ dị njọ nke na-eduga n'ịkwụsịtụ bụ nke dị n'etiti ebe a na-etinye ebebo na ndị na-anata Ceilistat ntụ ntụ. N'iburu ihe ndị a, Dr. Kopelman kwubiri na Ceilistat ntụ ntụ nwere profability proficiency, na ọ dị mma ma dị mma na nchịkwa nke oke ibu na njedebe ya.
10. Ịzụta oke ibu ibu ibu n'igwe
Ugbochi oke ibu ibu ozu ahia-AASraw
Ị nwekwara ike ịzụta Ugbochi oke ibu na ntanetị, Otú ọ dị, jide n'aka na ịzụta ahụ bụ site na ebe a pụrụ ịdabere na ya na mgbochi ibu ibu ihe ntanye. Ụdị nsụgharị ndị a na-akwadoghị nke ọgwụ a dị oke egwu ma nwee ike dị oke egwu maka ahụ ike gị. Ị nwekwara ike ịjụ dọkịta gị ma ọ bụ onye ahụike ahụ ka ọ gwa gị ka ị bụrụ ebe a pụrụ ịdabere na ya, ka i wee nwee ike ịzụta Mgbochi Ibu Ubu ugbua ugbu a.
Nke a bụ nkwenye a pụrụ ịtụkwasị obi-AASraw, isi na inye mgbochi ibu ibu powder.AASraw na-enye oke mma Mgbochi ibu ibu na ịdị ọcha abụghị ihe na-erughị 98%. Uru ndị pụrụ iche site n'aka AASraw dị ka ndị a:
1. Best mma steroids raw na obere ụlọ ọrụ mmepụta ego
Anyị na-ekwenye na nchekwa niile dị ọcha> 98%, na n'ihi na anyị bụ ndị na-emepụta abụghị ndị na-ere ahịa, ngwongwo niile a na-ere ya na ọnụ ala dị ala.
2. Nkwenye ngwa ngwa ma dị mma nke ngwaọrụ steroid
1) A ga-eziga ngalaba n'ime 24 awa mgbe ịkwụchara ụgwọ, wee nye nọmba nchịkọta.
2) Onye bara ọgaranya nwere ọhụụ na-etinye aka na nchebe na nke nwere ezi uche na mbupu ihe niile na-egbochi oke ibu. Usoro ụzọ njem dị iche iche, na ịhọrọ nke kacha mma dịka adreesị gị.
3) Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọma nke nnyefe dị mma karịrị 98%.
4) Oge ezipụ maka Mgbochi oke ibu: 3-5 ụbọchị ọrụ na USA, na 4-6 ụbọchị ọrụ na mba EU.
3. AASraw nwere ndị ahịa n'ụwa nile
1) Ọrụ ọkachamara na ahụmahụ bara ọgaranya na-eche ndị ahịa obi iru ala, ezigbo ngwaahịa nke ụdị steroid niile na nnyefe ọsọ ọsọ na-ezute ọchịchọ ha.
2) Nzaghachi onye ọrụ ga-enwe ekele, atụmatụ gị ga-eme ka anyị nwekwuo mma iji melite ọrụ anyị, ọ bụkwa ọrụ anyị izute ndị ahịa niile.
3) AASraw bụ otu n'ime ndị na-ebu ihe a pụrụ ịdabere na ya nke ndị nwere steroid na ngwaahịa kachasị mma, nchekwa na ngwa ngwa ngwa ngwa.
Mgbochi ibu ibu site na AASraw
Mgbochi ibu ibu CAS.NO Ọnụọgụ ọgwụ ika aha Star kwuru
Sibutramine HCL 84485-00-7 Ntughari ojiji nke sibutramine hydrochloride, ọdịnaya nke capsule 10-30mg. Meridia ★★★★★
Lorcaserin hydrochloride 1431697-94-7 10 mg ugboro abụọ kwa ụbọchị. Belviq ★★★
Orlistat ntụ ntụ 96829-58-2 Otu mkpụrụ ndụ 120-mg ugboro atọ kwa ụbọchị na nri ọ bụla nwere abụba. Xenical ★★★★
Ceilistat ntụ ntụ 282526-98-1 60mg ike capsules maka nlekọta ọnụ. Ceislim, ntọala. ★★
Syneprine HCL 5985-28-4 50-100mg kwa ụbọchị na 30-40 nkeji tupu oge mgbatị. Synephrine hydrochloride ★★★
Akwukwo (Oblean) uzuzu Ebumnuche sitere na Orlistat maka ntụpọ ọnwụ-Ihe dị egwu ịṅụ abụba ị kwesịrị ịmara !!! Ihe niile ị kwesịrị ịmara banyere Orlistat ntụ ntụ maka ọnwụ abụba
Tags: ịzụta Ceilistat ntụ ntụ, ịzụta Orlistat ntụ ntụ, Ceilistat ntụ ntụ, Orlistat ntụ ntụ
Ebumnuche sitere na Orlistat maka ntụpọ ọnwụ-Ihe dị egwu ịṅụ abụba ị kwesịrị ịmara !!!
Ihe niile ị kwesịrị ịmara banyere Orlistat ntụ ntụ maka ọnwụ abụba
Avanafil ntụ ntụ Tụnyere Viagra na Cialis ntụ ntụ maka ED agwọ Yohimbine ntụ ntụ: Ụdị, Uru, Mmetụta, Nyocha
Trenbolone ntụ ntụ